Khohliso, Xolani David.
Lolu cwaningo lugxile ekutholeni ngokadebona kanye namasu okufundisa kothisha esiZulwini ulimi lwesibili ekufundiseni ikhono lokufunda nokubukela ebangeni lesithupha kanye nelesikhombisa. Lolu ucwaningo lwesimo sobunjalo botho olusebenzise ipharadayimu yomhumusho, kusetshenziswa indlela yokuqoka ababambe iqhaza ngenhloso (purposive sampling) okuyiyona nqubo yokukhetha abahlanganyeli abanganikeza imininingwane ethembekile yesimo esicwaningwayo. Lolu cwaningo lwenziwe ezikoleni ezine ezisesiyingini saseMlazi eningizimu yeTheku. Lolu cwaningo lusebenzise amathuluzi amabili okuqoqa ulwazi okuyindlela yenhlololwazi esakuhleleka kanye nokuqoqa ulwazi ngokuhlala ubukele. Ucwaningo luphinde lwasebenzisa izindlela zocwaningo lobunjalo besimo ukuhlaziya ulwazi olutholakele. Imiphumela yocwaningo ihlaziywe kusetshenziswa uhlaka lwensizakuhlaziya ka-Krashen yokuthola ulimi lwesibili phecelezi, (Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition). Imiphumela yocwaningo iveze ukuthi othisha babhekene nenkinga yokungabi bikho kwezinsizakusebenza zokufundisa ulimi lwesibili. Othisha bolimi lwesiZulu babhekene nenkinga yomthwalo omningi maqondana nalolu limi. Abafundi abasemabangeni esithupha nelesikhombisa abanalo ulwazi oluyisisekelo lwesiZulu ngenxa yokuthi baqale ukufunda isiZulu ebangeni lesine. Abafundi babhekene nenkinga yokungakwazi ukufunda imibhalo yolimi lwesiZulu ngenxa yomthelela wesiNgisi esiqhakanjiswe kakhulu ezikoleni nasemakhaya. Lolu cwaningo luphinde lwaveza ukuthi othisha abaqeqeshekile kahle emaswini okufundisa ikhono lokufunda nokubukela kwisiZulu ulimi lwesibili.